एप्पल र माइक्रोसफ्ट ड्र्याग नास्डैक डाउन - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
मार्च 2, 2021 मार्च 2, 2021 बेनेडिक्ट कासिगारा व्यापार, विशेष समाचार, gigs, ग्लोबल विश्व, समाचार लेख, उत्तर अमेरिका, प्रविधि
नयाँ कोरोनाभाइरस खोप योजना धेरै देशहरुमा अगाडि बढिरहेको छ र अमेरिकी सीनेटले यस हप्ता हुने बित्तिकै १.1.9 खर्ब अमेरिकी डलरको नयाँ बचाव योजनामा ​​मतदान गर्नेछ।
एप्पल र माईक्रोसफ्ट जस्ता टेक्नोलोजी स्टकको तान्ने अन्तर्गत, डो र बेन्चमार्क अनुक्रमणिका बारम्बार नरम भएको छ, र नास्डैक १% ले घट्यो
विश्वव्यापी अर्थतन्त्र अझै पनि आर्थिक पतनको छेउछाउमा पुगेको छ, लगानीकर्ताहरूले अब बढी बृद्धि क्षमता भएका स्टकमा बढी ध्यान केन्द्रित गरिरहेछन्।
माइक्रोसफ्ट कर्पोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रिय टेक्नोलोजी कम्पनी हो र मुख्यालय रेडमन्ड, वाशिंगटनमा रहेको छ। यो विकास, निर्माण, लाइसेन्स, समर्थन, र कम्प्यूटर सफ्टवेयर, उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स, व्यक्तिगत कम्प्युटर, र सम्बन्धित सेवाहरू बेच्छ।
एप्पल र माइक्रोसफ्ट जस्तै टेक्नोलोजी स्टकको तान्ने अन्तर्गत डो र बेन्चमार्क अनुक्रमणिका बारम्बार नरम भएको छ, र नास्ड्याक १% ले घट्यो. जूमको प्रदर्शन चौथो क्वाटरमा अपेक्षित भन्दा राम्रो थियो, र पहिलो क्वाटरको अगाडि देखिको अपेक्षा भन्दा राम्रो थियो। शेयरको मूल्य एक पटक 7.4..0.5% ले पल्टाउनु भयो, र वर्तमान बृद्धि मात्र ०. XNUMX% मा संकुचित भएको छ।
नयाँ कोरोनाभाइरस खोप योजना धेरै देशहरुमा अगाडि बढिरहेको छ र अमेरिकी सीनेटले यस हप्ताको लगत्तै १. 1.9. खर्ब अमेरिकी डलरको नयाँ बचाव योजनामा ​​मतदान गर्नेछ। लगानीकर्ता आर्थिक सुधारका बारे आशावादी छन्।
अमेरिकाको १० बर्षे बॉन्ड उपज नरम भयो, अस्थायी रूपमा १.10%, ०.1.423 आधार बिन्दुले तल। बजारका सहभागीहरूले debtण उपजमा भएको भर्खरको वृद्धिको बारेमा फेडका अधिकारीहरूको विचारमा ध्यान दिन जारी राख्नेछन्।
एसईसी अध्यक्षका उम्मेदवार ग्यारी गेन्स्लरले सेनेट बैंकिking कमिटीलाई गवाही दिनेछन्; फेडरल रिजर्व बोर्डका निर्देशक लेएल ब्रेनार्डले अमेरिकी सम्मेलनका लागि विदेश सम्मेलन द्वारा आयोजित अनलाइन सम्मेलनमार्फत आर्थिक सम्भावना र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने छन्। मौद्रिक नीतिले एक कुरा जारी गर्‍यो।
धेरैले कम्प्युटरको मोबाइल उत्पादनहरुमा चासोको अभाव पछिल्ला केही वर्षहरुमा कसरी कर्पोरेट संचार र प्राविधिक पूर्वाधारको उपेक्षा गरिएको छ भन्ने सम्बन्धित छ भन्ने अनुमान लगाएको छ। केही विश्लेषकहरूले यो पनि अनुमान लगाए कि ब्लकबस्टर हिटको अभावलाई वर्तमान राजनीतिक अराजकतासँग जोड्न सकिन्छ। आईफोन र आईप्याडमा लगानीकर्ताहरूले विश्वास गुमाउनुको कारण जेसुकै भए पनि, यदि यो प्रवृत्ति जारी रह्यो भने यसले वित्तीय प्रणालीमा चरम खतराको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
विश्वव्यापी अर्थतन्त्र अझै पनि आर्थिक पतनको छेउछाउमा पुगेको छ, लगानीकर्ताहरूले अब बढी बृद्धि क्षमता भएका स्टकमा बढी ध्यान केन्द्रित गरिरहेछन्। हालसालैको शेयर बजार क्र्यास प्रमाणित भएपछि शीर्ष कम्पनीहरू एकै रातमा उदय हुँदैनन्। यसको मतलब यो छ कि लगानीकर्ताहरूले धैर्य धारण गर्न र बजारमा लगानी रहनु आवश्यक छ। यदि एक कम्पनी एक ब्रेकआउट स्टार को रूप मा देखा पर्दछ, यो सम्भावित स्पटलाइट बाहिर लुप्त हुनुभन्दा पहिले एक छोटो समय को लागी पीडित हुनेछ। अहिले, एप्पल र माइक्रोसफ्ट उत्पादनहरू यी मापदण्डहरू पूरा गर्न देखा पर्दैन।
बजार पनि विचार गरिनु पर्ने अन्य कारकको कारण तलतिर ट्रेंडिंग भएको छ। प्रत्येक महिना जारी आर्थिक रिपोर्टहरु को एक विशेष शेयर को लागी धेरै सकारात्मक वा नकारात्मक समाचार मास्क गर्न को प्रवृत्ति। नम्बरहरू कहिलेकाँही लेखा दिशानिर्देशहरू द्वारा स्केच गर्न सकिन्छ जुन कृत्रिम रूपमा स्टक मान फुलाउन सक्छ। त्यस्तै रूपमा, एक साधारण बजार विश्लेषण कहिलेकाँहि त्रुटिपूर्ण प्रमाण दिन सक्दछ जब अन्य नम्बरहरूसँग मिलेर।
एप्पल इंक एक अमेरिकी बहु-प्रविधि कम्पनी हो जसको मुख्यालय कपर्टिनो, क्यालिफोर्नियामा छ, जसले उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर सफ्टवेयर, र अनलाइन सेवाहरूको डिजाइन, विकास र बिक्री गर्दछ।
आजका दिनमा अत्याधुनिक प्रविधि उत्पादनहरू बनाउने कम्पनीहरूलाई शेयर बजारमा लगानी गर्न धेरै जोखिमपूर्ण मानिन्छ। यद्यपि त्यहाँ एउटा कम्पनी छ जुन टेक संसारलाई विकल्प प्रदान गर्दछ जुन टेक संसारमा छालहरू बनाउँदैछ। एप्पल, माइक्रोसफ्ट र गुगल सबै साना कम्पनीहरू थिए। अब तिनीहरू ठूला कम्पनीहरू हुन्। तिनीहरूलाई किनार दिन्छ? बलियो ब्रान्डि and र एक गुणात्मक उत्पादन लाइनको संयोजन।
यो एकल कारण इंगित गर्न असम्भव छ एप्पल र मोजिलाले विगत केहि बर्षहरूमा यस्तो अभूतपूर्व वृद्धिको आनन्द लिएको छ। दर्जनौं कारणहरू छन् जुन लोकप्रियतामा यो बृद्धिलाई श्रेय दिन्छ, तर यसको एक ठूलो अंशले समस्याहरूको समाधान गर्ने उपभोक्ता उत्पादनहरू सिर्जना गर्न तिनीहरूको अद्भुत ट्र्याक रेकर्ड समावेश गर्दछ। विश्लेषकहरूले एप्पलले यी मास्टरपिसहरू सिर्जना गर्न जारी राख्न सक्छ कि सक्दैन भनेर शंका व्यक्त गर्न सक्दछन्, त्यहाँ विद्यमान उत्पादनहरू लिन र उनीहरूलाई समयसँगै अझ राम्रो बनाउन सक्ने क्षमतामा कुनै श ability्का छैन।
उदाहरण को लागी, एप्पल लगातार आफ्नो प्रयोगकर्ताहरु संग कुराकानी गर्न नयाँ र नवीन तरीका संग आयो। उनीहरूले ग्राउन्डब्रेकिंग उपकरणहरू पनि विकास गरेका छन् जसले इन्टरनेटको फाइदा लिन्छन्। सफारी मोबाइल अपरेटिंग प्रणालीलाई आईफोनमा लैजाने तिनीहरूको भर्खरको घोषणाले स्मार्टफोनहरूको लागि बार सेट गर्‍यो कि यसले मानिसहरूलाई कसरी उनीहरूको फोनहरू प्रयोग गर्दछ भन्ने कुराको पुन: परिभाषा मात्र दिदैन तर मानिसहरू सदाको लागि उनीहरूसँगै बोक्ने चीज पनि बन्छन्।
एप्पल सांप्रदायिक समाचार ग्यारी Gensler माइक्रोसफ्ट nasdaq